Karoorri faalama pilaastikaaf 'Obsa dhumaa' jedhu akeekame - BBC News Afaan Oromoo
Karoorri faalama pilaastikaaf 'Obsa dhumaa' jedhu akeekame
Roojer Harrabiin Xiinxalaa haala qilleensa naannoo BBC
Karoorri faalama pilaastikiin garbawwanirra ga'uuf 'obsa dhumaa' jedhu Yaa'ii Mootummoota Gamtoomaniirratti biyyootaan walii galteerra ga'amuu ni danda'a jedhama.
Mootummoonni gara waliigaltee, seera balfi pilaastikaa galaanatti akka hin gatamne dhowwutti akka dhufan gaafatamaa jiru.
Yeroo ammaa dooniwwan pilaastika akka galaanatti hin gatne dhowwamaadha, garuu seerri jaarmiyaa addunyaa pilaastikoota lafarraa galaanatti lolaan makaman ilaallatu hin jiru.
Beektonni pilaastikiiwwan garbawwanitti makaman addunyaa kanaaf dhimma yaaddessaa akka ta'e dubbatu.
Faalamni pilaastikaa daangaawwan addunyaa kamiinu hin ittifamu.
Korri ministeerota Mootummoota Gamtoomanii torban kana keessa Naayiroobiitti taa'amu rakkoo hamaa pilaastikaa ittisuudhaaf walii galtee bal'aarra ga'u jedhamee eegama.
Balfawwan pilaastikaa gurguddaafi xixiqqaa hanbisuudhaaf tarkaanfii akka addunyaatti fudhatamuu qabuuf qaamni fala barbaaduurratti hojjetu hundaa'aa jira.
Amerikaan keessatti qooda fudhachuuf tole jetteetti, garuu seerawwan akka addunyaatti jiran fudhaachuurratti diduudhaan beekamti.
Yaadni tokko kan jiru bifa moodeelii walii galtee haala qilleensaa Paaris agarsiisuudha.
Goodayyaa suuraa Faayidaan pilaastikii inni guddaan meeshalee fi oomishaalee gara garaa saamsuudha.
Walii galtee sana keessatti, haalli ittiin waanta haala qilleensaa faalu gadi dhiisan itti xiqqeessan gabaasaniifi walii galteen galma yeroo dheeraa seeraan lafa kaa'ameera - garuu tarkaanfiiwwan biyyaa matumasaaniin fedhiidhaan murtaa'u.
Madda kamirraa hangamiin akka pilaastikoonni galaanatti makaman odeeffannoo foyyaa'aa argachuun tarkaanfii jabaadha jedhu ogeessonni dhimma naannoo.
Mootummoonni Gamtoomanii bara 2025tti balfa pilaastikaa bal'inaan hir'isuuf dhimmamaa jira, ejjennoon Noorweyiin durfamu garuu kaayyoon yeroo dheeraa balfa pilaastikaatiif obsa dhumaa ta'uu qaba jedha.
Ejjennoon kun qarqara galaanotaarraa pilaastikoota jiran qulqulleessuus ni dabalata. Kun Walakkaa Paasfikitti yaaliiwwan sadarkaa bal'aa ta'een qulqulleessuuf yaalamaa jiru kan lubbu qabeeyyii miidha jedhamee sodaatamu caalaa qarshii ba'uuf bu'aa gaarii kan argamsiisuufi naannoodhaafis foyyaa'aa ta'edha.
Keessumaa pilaastikoota qarqara galaanaa qulqulleessuun barbaachisaadha, sababiinsaas aduun pilaastikoota gurgoddoo gara bifa miidhaa jabaa geessisan xixiqqootti caccabsa.
Yaa'ichi gaggeessummaaniifi qindoominni cimaan - Sagantaa Haala Qilleensaa Mootummoota Gamtoomanii, ykn tarii ejensii pilaastikaa Mootummoota Gamtoomanii dhaga'uuf jira.
Of eeggannoon deemuu?
Noorwey mootummoonni daangaasaanii keessaa balfi pilaastikaa hangamiitu ba'ee akka galaanatti makamu sirriisaa akka walitti qaban barbaaddi. Kun salphaa akka hin taanes amenteetti.
Dhimmichatti namni dhiyaa ta'e akka Oduu BBCtti himetti: "Gaaffileen furmaata argachuu qaban hedduutu jiru. Akka pilaastikni lafarraa galaanatti hin makamne seerri ittisu jiraachuu malaa?
"Mit yoo ta'e, tarkanfii hunda galeessa ta'e attamiitu jiraachuu qabaa? Ka'umsumarraa dhimma guddaa duuka bu'aa jirra."
Chaayinaan - akka addunyaatti hundaa caalaa pilaastikaan kan faaltu - seera addunyaa kanaan buluu of eeggannoon ilaalti.
Biyyoonni guddinaan faalan biroon kan akka Indiiifi Indoneezhiyaa garuu ejjennoo kana ni deggeru.
Muummichi Ministeeraa Indii Naarendiraa Moodii dhiyeenya kana Muumbaayitti pilaastikaa qarqara galanaa qulqulleessuu, "Dhaloota dhufuuf naannoo kenyaa kunuunsuun ga'ee keenya," jedhan.
Eiriik Liindebjergi WWF irraa akka jedhetti walga'iin Naayiroobii rakkoo pilaastikaaf waan ka'umsa ta'u mirkaneessuu danda'a. "Waliigalteen haala jijjiirama qilleensaafi akaakuuwwan uumamaa yaa'ii kanarratti jalqabame - kanaaf sochii akkasii milkeessuu keessatti muuxannoo gaarii qaba.
"Amma pilaastika toonii miliyoona sadetti ta'u garbatti makameera; dhimi kun ifatti dhimmoota waliigaltee addunyaa barbaadan," jechuun Oduu BBCtti himan.
"Dhangala'uun pilaastikaa baallee guddaafi kan miidhaa qaqqabsiisaa jirudha; daangaa tokkorraa gara biraattis ni ce'a. Sirriimatti pilaasikni akka garbatti hin dabalamne dhaabuun nurra jira - kanaaf walga'iin kun ka'umsa baayyee gaarii waan argamsiisu fakkaata."
Walga'iin kun waa'ee faalama qilleensaafi bishaanis ni mariyata. Sibiila liidii halluu keessatti fayyadamuu dhaabuun tarii mirkanaa'uu danda'a.
Roojeriin Tiwiiteriirratti hordofaa
Pilaastikiin attamiin hanga faayidaa isaa miidhaan isaas guddate
Faalamni attamiin hiyyeeyyii adduunyaa ajjeesaa jiraa?